Isu - Dhizaini magazini
Chipiri 28 Chikumi 2022
Kugamuchira Vaenzi Serenity Suites inorara muNikiti, Sithonia kugara muChalkidiki, Greece. Iyo yakaoma ine zvikamu zvitatu zvine makumi maviri suites nedziva rekushambira. Zvivakwa zvekuvaka zvinoratidzira chimiro chakadzama chezvimbo yakatarisa uchipa maonero akakwana kugungwa. Dziva rekushambira ndiro musimboti pakati pekugara uye zveruzhinji zvinhu. Iyo yekugamuchira vaeni yakaoma inoumba chiratidzo munzvimbo, seanoburitsa goko rine hunhu hwemukati.
Muvhuro 27 Chikumi 2022
Uv Sterilizer SunWaves is sterilizer inokwanisa kubvisa utachiona, mold, mabhakitiriya uye mavhairasi mumasekonzi masere chete. Yakagadzirirwa kupaza huroyi hwebhakitiriya huripo panzvimbo dzakaita semakapu ekofi kana masosi. SunWaves yakagadzirwa nedambudziko regore reCCIDID-19 mupfungwa, kuti ikubatsire kunakidzwa nekuita senge kunwa tii pacafe zvakachengeteka. Inogona kushandiswa zvese munzvimbo yehunyanzvi uye yekumba nekuti nekuita yakapusa inouraya munguva pfupi pfupi kuburikidza nemwenje weUV-C une hupenyu hurefu uye kushomeka kwekugadzirisa, zvakare kubatsira kudzikisa zvinhu zvinoraswa.
Chirongwa Chezviitiko Zvekugadzira
Svondo 26 Chikumi 2022
Chirongwa Chezviitiko Zvekugadzira kuratidzwa, kukwikwidza kwekugadzira, basa rekugadzira, dhizaini yekudzidzisa kubvunza uye kuburitsa mapurojekiti ane chinangwa chekusimudzira vagadziri veRussia uye mhando kunze kwenyika. Zviitwa zvedu zvinosimudzira vagadziri vekuRussia kutaura kuti vagone kukwana ruzivo neunyanzvi kuburikidza nemaprojekiti epasi rese uye kuvabatsira kuti vanzwisise basa ravo munharaunda yekugadzira, maitiro ekusimudzira nekuita zvigadzirwa zvavo kukwikwidza, uye kugadzira zvigadzirwa zvechokwadi.
Kudzidzisa Uye Kudzidzisa Chishandiso
Mugovera 25 Chikumi 2022
Kudzidzisa Uye Kudzidzisa Chishandiso Corporate mandala chinhu chitsva chekudzidzisa uye chirauro chishandiso. Iko kuvandudza uye kwakasarudzika kusanganisa yekare mandala nheyo uye kuzivikanwa kwekambani kwakagadzirirwa kukurudzira kushanda pamwe uye bhizinesi rizere kuita. Uyezve chinhu chitsva chekambani kuzivikanwa kwemakambani. Corporate mandala iboka chiitiko chechikwata kana wega chiitiko che maneja. Iyo yakagadzirirwa zvakananga kune imwe kambani uye iyo inoratidzwa nechikwata kana neyemunhu akasununguka uye nenzira inonzwisisika uko munhu wese anogona kusarudza chero ruvara kana munda.
Inotakurika Ultraw Paturu Yekuongorora
Chishanu 24 Chikumi 2022
Inotakurika Ultraw Paturu Yekuongorora Prisma yakagadzirirwa kusavhiringidza zvinhu zvekuongorora munzvimbo dzakaipisisa. Iyo yekutanga detector yekubatanidza yepamberi chaiyo-nguva yekufungidzira uye 3D scanning, zvichiita kuti kududzira kwakashata kuve nyore kwazvo, kuderedza nguva yehunyanzvi pane saiti. Iine nzira isingafungidzike yekuvharika uye yakasarudzika nzira dzakawanda dzekuongorora, Prisma anogona kufukidza zvese zvekuyedza zvekushandisa, kubva pamafuta mapaipi kusvika kune anerospace zvikamu. Iyo yekutanga detector ine yekubatanidza data kurekodha, uye otomatiki PDF mushumo chizvarwa. Wireless neEthernet yekubatanidza inobvumidza iyo unit kuti iwedzerwe nyore kana kuongororwa.
Marabhoritari Emvura Yekuchenesa System
China 23 Chikumi 2022
Marabhoritari Emvura Yekuchenesa System Purelab Chorus ndiyo yekutanga modular mvura yekuchenesa system yakagadzirirwa kukwana munhu ega marabhoritari zvido uye nzvimbo. Iyo inoburitsa ese mamakisi emvura yakacheneswa, inopa inotyisa, inoshanduka, yakagadziriswa mhinduro. Zvinhu zvemu modular zvinogona kugoverwa muvherabhoritari kana kubatana kune imwe neimwe mune imwe shanduro yakasarudzika, kuderedza tsoka yehurongwa. Haptic kudzora inopa zvakanyanya controllable dhiza dhiza kuyerera, nepo halo yechiedza inoratidza Chorus 'mamiriro. Tekinoroji nyowani inoita kuti Chorus ive iyo yepamusoro-soro huripo, inodzora kukanganiswa kwezvakatipoteredza uye kumhanya kwemitengo.
The Cutting Edge Kugovera Pharmacy Chipiri 28 Chikumi
Cloud of Luster Muchato Wedenga Muvhuro 27 Chikumi
Sberbank Headquarters Atrium Svondo 26 Chikumi
Chikumi 2022 (90)
Dhizaina bvunzurudzo yezuva Chipiri 28 Chikumi
Dhizaina ngano yezuva Muvhuro 27 Chikumi
Dhizaini yezuva Svondo 26 Chikumi
Mugadziri wezuva Mugovera 25 Chikumi
Dhizaini timu yezuva Chishanu 24 Chikumi
Kugamuchira Vaenzi Uv Sterilizer Chirongwa Chezviitiko Zvekugadzira Kudzidzisa Uye Kudzidzisa Chishandiso Inotakurika Ultraw Paturu Yekuongorora Marabhoritari Emvura Yekuchenesa System